Ahitana ministra vehivavy miisa 11 fa mbola lavitra ilay mitovy isa - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Matoa nosoloina ny governemanta dia misy olana hitan’ny mpitondra na koa henon’izy ireo ny fitarainan’ny vahoaka na ny fitarainan’ny mpanao politika na koa ny depiote. Maromaro ireo vehivavy notendrena. « Mahafaly anay vehivavy mpitolona izany na dia mbola tsy tanteraka aza ilay 50% dia mba efa nitombo ny isan’ny vehivavy», hoy Ramampy Zenaide depiote teo aloha sy ben’ny tanana teo aloha. Ireo vehivavy ireo rehefa mitondra araka ny maha reny azy dia tokony hitsinjo ny vahoaka raha raisina tahaka ny zanany izany vahoaka izany. Izay no tokony ho tanterahany fa tsy ho faly na ho variana fotsiny nahazo toerana na hoe nahazo voninahitra. Tokony ho taitra avy hatrany ny vehivavy raha misy zavatra tsy mandeha ao an-tokantrano, tokony ho tahaka izay ihany koa rehefa nomena andraikitra na aiza na aiza na inona na inona. Nanamafy i Ramampy Zenaide fa izay no andrasany amin’ireo vehivavy.
Tsy tokony ho variana fotsiny amin’ny fivoriana etsy sy eroa fa tokony hifantoka amin’ny fampandrosoana mba hipaka any amin’ny vahoaka. Miezaka ihany koa ny hamaha ireo olana mampikatso ny fampandrosoana ny Firenena. Ny asa ihany no misy vokany eo amin’ny fampandrosoana. Raha misy zavatra hita fa tsy mandeha dia tokony hahay hifampiresaka ny samy minisitra. Raha ny tena marina aza dia tokony hifandray ireo asa ataon’ny minisitera tsirairay fa tsy samy haka ho azy. Mampikatso ny tahaka izany. Misy ihany koa ireo mihevitra fa ny vehivavy dia be haitraitra ka tsy tokony homena toerana indrindra fa manapa-kevitra. Tahaka ny olona rehetra ny vehivavy, samy manana ny toetrany, manana ny kilemany sy ny fahaizany ihany koa fa manana tombony aloha izy fa manana ilay atao hoe 5eme sens amin'ny mahavehivavy azy.
Tenin’ny filoham-pirenena ny hoe 50-50 ny vehivavy sy ny lehilahy ao amin’ny governemanta nandritra ireny fampielezan-kevitra ireny. Efa nitombo aloha izy tamin’ity indray mitoraka ity na tsy nahatratra izany aza. Andrasana izany ny ezaka ataon’ireto minisitra vaovao ireto indrindra fa ny vehivavy hampiseho fa tena miavaka tokoa izy ireo rehefa mandray andraikitra.
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Professeur ASSOUMACOU Elia Béatrice
Ministre de l’Environnement et du Développement Durable
Marie Michelle Sahondrarimalala
VAVITSARA Rahantanirina Gabriella
Ministre de l’Artisanat et des Métiers
Vice-ministre chargé de la Reforestation auprès du Ministère de l’Environnement et du Développement durable
Vice-Ministre chargé de la Jeunesse auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports
Tahiana Juliana RATOVOSON